Deyn-bixiyeyaasha Paris Club oo isku raacay in la cafiyo $1.4 bilyan ay ku leeyihiin Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDeyn-bixiyeyaasha Paris Club oo isku raacay in la cafiyo $1.4 bilyan ay ku leeyihiin Soomaaliya
Golaha wasiirada Soomaaliya oo ka qeybgalaya shir video-ah oo ay Paris Club la yeesheen. [Isha Sawirka: Twitter]
Washington-(Puntland Mirror) Wadamada deynbixiyeyaasha ah ee katirsan Paris Club ayaa Talaadadii isku raacay in dib loo habeeyo deynta Soomaaliya, oo ay kamidtahay in si dhaqso ah loo cafiyo $1.4 lagu leeyahay wadanka Geeska Afrika.
Paris Club ayaa muddo sagaal saacadood shir ay ku yeesheen video-ka ayay isku raaceen in 67% deynta ay ku leeyihiin Soomaliya la cafiyo.
Ku dhawaad 30 sanno oo colaado ah ayaa Soomaaliya ka saaray hanaanka maaliyada adduunka iyo cafinta deynta lagu lahaa taasoo waddo u furaysa dhaqaale cusub oo maaliyadeed oo dalka soo galaya.
Soomaaliya ayaa lagu lahaa deyn dhan $5.4 bilyan. Bankiga Horumarinta Afrika iyo Bankiga Adduunka ayaa horey u cafiyay qaybtii ay ku lahaayeen Soomaaliya, halka IMF ay sheegtay in Soomaaliya ay soo gaartay bartii looga cafin lahaa deynta.